Afọ 3000 gara aga, ndị Ijipt nwere mmekọrịta azụmahịa na America na China - AFRIKHEPRI
E nwere 3000 afọ gara aga, ndị Ijipt nwere njikọ ahia na America na China
Interview na Swami Prajnanpad (Audio)
Tọzdee, Julaị 2, 2020
Nwa nne nke Ramses 2
Uzo nicotine na cocaine n'ime ugbo Egypt
Anyị nọ na 1992, na Museum of Egypt nke Munich. Svetla Balabanova, toxicologist na pathologist-enyocha Mama Henoubtaoui, a priestess nke XXI Dynasty (1085-950 BC). O juru ya anya na ọ na-achọpụta na nyocha ahụ na-ekpughe ọdịdị nicotine na cocaine. Ugbu a abụọ ndị a bekee ga na-mara na ụwa ochie mgbe njem nke Christopher Columbus, karịa 2500 afọ mgbe e mesịrị! Ọnụnọ ha na ndị Ijipt nọ na ya bụ ya mere ọ gaghị ekwe omume.
Iji mee ka o doo anya, ọ na-edegharị usoro nyocha nke na, megide nsogbu niile, gosi nke mbụ: ọ bụ nicotine na cocaine. N'ịbụ onye kwadoro na nke a bụ njehie na-eme ihe, Svetla Balabanova na-eziga ndị na-eme nnyocha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Nyocha ndị ọhụrụ na-emezi ya. Oge a, obi abụọ enweghịzi ike: Henubtaoui na-ekpuchi ihe abụọ nke ga - apụta n'Ijipt ruo mgbe afọ iri abụọ na ise gasịrị, ọ dịkarịa ala! Iji kọọrọ ya ihe ijuanya ya, Svetla Balabanova bipụtara otu isiokwu, nke na-eme ka esemokwu ahụ dịghachi ngwa ngwa. Nmeghachi ahụ adịghị anya na-abịa. Ọ na-enweta ọtụtụ akwụkwọ ozi egwu, ọbụna mkparị. A na-ebo ya ebubo na ọ na-emegharị ule ndị ahụ. Nye ndị ọkà mmụta ihe ochie na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme, ịga America tupu Columbus enweghi ike.
Nyocha ọhụrụ na-egosi na nicotine na cocaine bụ Svetla Balabanova na-atụle ihe ọzọ. O nwere ike ịbụ na mummy amalitela ịkpa ókè n'èzí. N'ikwu okwu banyere ya, onye na-ahụ ihe gbasara ahụ ike na-eme nyocha ọhụụ ọhụrụ. Ọ na-arụ ọrụ maka ndị uweojii dịka onye na-enyocha ahụike. A ghaghị iji usoro na-ezighi ezi mee mkpebi ma ọ bụrụ na onye nwụrụ anwụ ewerela ọgwụ ọjọọ. Ihe niile dị mkpa bụ iji nyochaa njedebe nke ntutu isi. Ọ na-ejigide akụkụ nke mkpụrụ ndụ ndị kwekọrọ na ya ruo ọnwa, ma ọ bụ ruo mgbe ebighị ebi na ọnwụ. Usoro a, nke nwere ndị omempụ nwere mgbagwoju anya, ụlọikpe mara ya. Ọzọkwa, ihe a na-atụghị anya ya pụtara doro anya: omegwoju anya Henubtaoui nwere nicotine na cocaine. Nkwupụta nke nje nke mpụ adịghị ejide.
Na 1976, mama mumia nke Ramses II weghachite Paris na Paris site n'aka Oriakụ Christiane Desroches Noblecourt, Egyptologist nke ezigbo aha. A nabatara mama a na isi nke steeti. Ma ọ nọ na France na-enweta mweghachi, n'ihi ọnọdụ ọjọọ ya. A na-ewepụta ihe atụ. Dr. Michelle Lescot nke Natural History Museum na Paris bụọbụna nyocha ... ma chọpụta ọnụnọ kristal mara mma nke ụtaba. Ugbu a, Ramses nke Abụọ nwụrụ na 1213 BC Nke a enweghi ike ime. Ikpe ahụ na-eweta mmetụta dị ukwuu n'ọmụmụ ihe ochie na akụkọ ntolite. E nwere mkpu ákwá na aghụghọ. Ọ gaghị enwe usoro: nkwupụta nke njikọ dị n'etiti America na Mediterenian n'okpuru Antiquid bụ, site na ndị na-akọ akụkọ ihe mere eme, na-agbagha. Nke a bụ njehie, a na - agbaghakwa "nkwarụ" ahụ.
Otú ọ dị, n'akwụkwọ ya Ramses II, Ezi Story, bipụtara na 1996 na Pygmalion, Christiane Desroches Noblecourt dere, sị: "Mgbe oge nke mummification, ya obi jupụtara ọtụtụ disinfectants: embalmers eji a mbubreyo" hash "nke epupụta nke Nicotiana L., hụrụ megide n'ime mgbidi nke obi, na-esote nicotine ego, na-dịkọrọ ndụ nke mummification, ma mfịna n'ihi nke a osisi bụ amaghị na Egypt, semble-t-ya. "(RAMSES II, Ezi Akụkọ, peeji nke 50).
Ebee ka ụtaba nke ndị Ijipt si?
Ụtaba Egypt, n'ihi gịnị? Svetla Balabanova na-aga n'ihu ya nnyocha na mere a ijuanya chọpụtara: ego nke nicotine ahụrụ na ntutu isi matriks na-egosi a na nnukwu oriri, nke na-ejikarị kwesịrị kpatara ọnwụ nke n'ji. Ọ gwụla ma onye ahịa ahụ anwụọworị. Mgbe ahụ, ọ na-ebute echiche ọzọ: ụtaba na-amalite usoro mummification.
Nke a na-ezobe onye a mgbe niile site na ndị ụkọchukwu, otu ka na-amaghịkwa nkọwa nke arụmọrụ a, ma karịsịa ihe ndị e ji mee ihe. Ma nchọpụta a na-ekwu maka ụtaba na Egypt tupu JC Ebee ka ụtaba ndị Ijipt si bịa? A maara na ndị Ijipt na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe dịka mandrake, hemp, opium, na hashish, tumadi maka uru ọgwụ ha. O nwere ike ịbụ na e nweela ihe ọkụkụ na osisi, nke dị nso na ụtaba, nke mere ka otu ihe ahụ pụta ma kwụsị n'ihi nnukwu oriri. Ọ ga-abụ na ụtaba a si n'ebe ọzọ. Ma olee ebe?
Osisi a bụ obodo South America. Ma enwekwara iche na Oceania na Polynesia. Ọ bụ na ụtaba a na-abịa Egypt mgbe ọ gbasoro ụzọ ahia nke Far East, India, Persia, na Mesopotemia? Nke a ga-egosi na n'oge ahụ, e nwere njikọ ahịa na ala ndị a dị anya. Echere echiche a site n'eziokwu bụ na e nwere ihe silk eri na nwa Egypt nke Luxor.
Nke a na silk nwere ike si China. Na cocaine? Ọ bụrụ na enigma nke ụtaba nwere ike ịchọta mmalite nke azịza na nkwupụta nke osisi na-efu ma ọ bụ mbubata site n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ, nkọwa abụọ a apụghị itinye aka na cocaine. E nwere osisi dị nso coca n'Africa, ma ọ dịghị nke n'ime ha nwere ọgwụ ọjọọ. Maka ndị na-akụ ndụ, ndị na-ahụ maka osisi ndị dị nso na America coca dị n'Africa, n'oge ochie, bụ ozizi ụgha. Ya mere, ọ dị n'oge ahụ, mmekọrịta dị n'etiti Mediterranean na America? N'akụkụ osimiri Brazil, a chọpụtawo ite sitere na veranda Rom.
Ebe Amerindian, tinyere ili, gosipụtara ihe ijuanya. Ya mere, na La Venta na San Lorenzo, obodo ukwu abụọ nke Olmec, nke e debere site na narị afọ nke 9 na narị afọ nke 12 BC, bụ isi ndị isi ha bụ ihe ndị doro anya Negroid. Ntre, Ndi Africa ama ọfiọk America ke ini oro? N'akụkụ abụọ nke Atlantic, ọ bụ omenala itinye ihe oyiyi na sarcophagi. Ndị ọkà mmụta nke Ijipt kwesịrị ịrụ ọrụ n'ebe ndị nwụrụ anwụ nọ. N'aka nke ọzọ, anyị amaghị ọrụ ndị Amerindian nwere. Ihe ọzọ merenụ: Phoenicians, dị ka ndị Amerindia, kpara ego ma ọ bụ nkume jade, nke mere na onye ahụ nwụrụ anwụ nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ala ndị nwụrụ anwụ.
Ezigbo agbụrụ ahụ na-anọchite anya vase ... na Campeche, na mba Mayan, otu akpa nke si n'ili nwere atọ edemede. Ụfọdụ nwere akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ, ndị ọzọ nwere akpụ ọcha, ndị ọzọ nwere akpụkpọ anụ. Kedu ka ndị Amụma nke America ga - esi chee na akpụkpọ anụ atọ a na - acha ọcha ma ha ezuteghị ụmụ nwoke ndị a?
Ịdị adị nke mmekọrịta transatlantic na oge ochie ga-enye azịza nke ọtụtụ enigmas, na-achọ ka a na-eme nnyocha dị mkpa na ntụziaka a. Ọ na-ebo ọtụtụ ndị ọkà mmụta ihe ochie ebubo na ha na-enwe mmetụta na-adịghị agafe agafe na isiokwu ahụ. Ọ na-aga n'ihu, na-ekwu na e nwekwara okporo ụzọ azụmahịa na Pacific. Ihe a na-enweta site na ụtọ nduku, nwa amaala America, nke a chọtara na China. Otu ihe maka obere ego.
Martin Bernal, onye na-akọ akụkọ ihe mere eme na Mahadum Cornwell, na-atụlekwa na echiche nke transatlantic na-aga n'ihu n'ihu Columbus yiri ka ọ dị. Nye ya, ọganihu adịghị adị n'usoro, dị ka ọtụtụ ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na-ekwu.
Akwụkwọ ọkọwa okwu nke ilu ilu Africa